Walter Heyer: Transgender nenina |
Walter Heyer: Fitarainana mavesatra
Walt Heyer - Transgender taloha.
I Walt dia manana tantara mahazatra toy izany. Mampisafotofoto ny fanolokoloana sy fanararaotana ara-pananahana ka niteraka fisafotofotoana ara-nofo sy ny firaisana ara-nofo.
I Walt dia nidina tamin'ny làlana mankany transgender hiaina amin'ny maha vehivavy azy mandritra ny 10 taona latsaka. Ny fifangaroana dia manapotika asa mahomby sy fiainam-pianakaviana mahomby.
Farany dia tsy afaka ny ady intsony i Walt. Namela ny fiainana transgender na maty. Mifidy fiainana. Azonao atao ny miditra ny boky sy ny tranonkala manohana an'i Walt amin'ity pejy ity.
Ny fanandramana amin'ny zanatsika: Ireo mpitsabo dia tsy mahalala hoe iza ny tena zanaky ny Trans.
Amin'izao fotoana izao ny dokotera dia tsy misy fomba ahafahana milaza mialoha hoe iza avy ny zaza mpitsabo amin'ny maha-lahy sy ny vavy dia hitohy amin'ny fitrandrahana lahy sy vavy, ary manery ny fotoana faran'izay kely indrindra amin'ny fitsaboana sy ny fandidiana tsy miova izy ireo.
Lahatsoratra an'ny Walt Heyer tao amin'ny The Public Discourse.
Walt dia nanoratra isa na lahatsoratra ho an'ny Public Discourse momba ny hetsika transgender.
Nipoitra tamin'ny fomba am-boalohany tamin'ny Public Discourse: Etika, lalàna, ary Common Good, gazety amin'ny Internet ao amin'ny Witherspoon Institute of Princeton, NJ ary naverina navoaka alalana.
Lahatsoratra an'ny Walt Heyer tao amin'ny The Federalist
Walt dia nanoratra isa na lahatsoratra ho an'ny Federalista amin'ny hetsika transgender.
Lahatsoratra an'ny Walt Heyer ao amin'ny Signal Daily.
Walt dia nanoratra isa na lahatsoratra ho an'ny Daily Signal momba ny hetsika transgender.
Tantaran'i Walter Heyer Transgender Fahafaham-baraka.
Walt Heyer nanoratra momba ny fiainany hatramin'ny zaza very saina ka hatramin'ny transwoman sy miverina.
Ity lahatsoratra ity dia natao pirinty tany Etazonia Today:
Ny fivarotam-bokotra Walt Heyer momba ny firaisana ara-nofo.
Tranonkala maneso momba ny fanovana ara-nofo ao Walt Heyer.
Mba hanohanana ny transransitioners Walt dia nanangana tranokala feno miaraka amin'ny lahatsoratra, tantara ary boky.